Dhangii - Addaan Fageenya filadhu
Miseensa foormulaa addaan fageenya murteessuuf barbaadduf qabduu Akaakuu fayyadama. Danaan qaaqa akaakuu filatte irratti hunda'a. Foddaan duraani addaan fageenyi saanduqa kaa'ame keessaan fooyya'uu isaa isinitti mul'isa.
Qabduun kun akaakuu addaan fageenya jijjiiruf barbaadde akka filtu sii hayyama.
Addaan fageenya jijjiiramaa fi ogeejjii giddu, sararoota giddu, fi mallattoo ruuttii fi raadikalii giddu jiru ibsa (hiika).
Addaan fageenya hundee
Addaan fageenya kasaale irrarfii fi jalarfiif hiika.
Addaan fageenya kabala entaa fi irrayyee ykn waamsiisa giddu jiru hiika.
Dheerina irra hafaa fi hulfina sarara kabala entaa hiika.
Addaan fageenya mallattoo idaati fi haala timijii gidduu jiru hiika.
Addaan fageenya sadallaa fi qabiyyee gidduu jiru hiika.
Hamamta irra hafoo (bitaa/mirga)
Sadallaa safaraa mara
Sadallaa gosa hundumaa safari. Yoo foddaa Ajaja keessatti ( a irra b) galchitee, hojja hundumaa yaada waligalaa sadallaan marsa. Salphaanumatti bitaa ( a irra b mirga ) galchuun dhiibba kana fidu dandeessa.
Hamamta irra hafaa
Addaan fageenya sadhatawaa miseensota tarreentaa keessa hiika
Addaan fageenya tarjaa
Addaan fageenya mallattoole walitti dhufeenya jijjiirama waliini ibsa.
Addaan fageenya gadee
Addaan fageenya ogeejjii fi jijjiiramaa ykn lakkoofsa giddu ibsa.
Foormulaakeetti handaara dabali. Yoo barreessa LibreOffice keessa faayila barruu keessatti foormulaa walitti fiduu barbaadde dirqalli kun qabatamaan fayyida-qabeessa. Yemmu qindeessinu, akka hamamtatti 0 hin fayyadamne mirkaneefadha, sababa rakkoo ilaalcha barru iddoo (bakka) saagitii marsanitti uumaniif.
Title is: Addaan Fageenya